ထို့အပြင် optic fiber ကိုအမှတ်ကိုခေါ် FTTH fiber optic socket က, SC ဖိုင်ဘာ optical အမျိုးအစားပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကို fiber optic Adapter ကတစ်ဦးတပ်ဆင်ခခွင့်ပြုထားတဲ့နှစ်ခုကိုဆိပ်ကမ်းများရှိသည်။
FTTH faceplate ကို ABS ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။ တပ်ဆင်၏မိုးလုံလေလုံမြို့ရိုးကို-တပ်ဆင်ထားအမျိုးအစား 25 *4အရွယ်အစား2သွပ်ရည်စိမ် screw နှစ်ခုအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံးအသုံးပြုသူ optical box ရဲ့ရှုထောင့် * 22 86 * 86 ဖြစ်ကြသည်အချင်းဝက်အဘယ်သူမျှမ splice ဗန်းလိုအပ်သောအလင်းနှင့်အဆင်းကိုနှစ်သက်ကွေးသင့်လျော်သောဖိုင်ဘာကြိုးအတှကျလုံလောကျကျယ်ပြန့်သည်, အစွမ်းသတ္တိကိုစက်မှုကာကွယ်မှုရှိတယ်။
FTTH နည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. အခမဲ့အသုံးပြုသူများသည်လက်လှမ်းသို့မဟုတ် data ကို access ကိုပေးသည်
အဆိုပါဖိုက်ဘာကေဘယ်လ်ကြိုး, patch ကိုကြိုးသို့မဟုတ်အောက်ခြေကနေ optical မြို့ရိုးကိုထွက်ပေါက်အတွက် pigtails ကြိုးတွေ input ကို။ ထို့နောက် cable ကိုတက်ကြွစွာပစ္စည်းကိရိယာများမှအဆုံးအသုံးပြုသူ Terminal box ထဲကစေပါတယ်။
Jera offers all the FTTH fiber optic termination boxes, with needed FTTH and PON accessories: Fiber Optic Pigtails, fiber optic Adapter ကို , Protection Sleeve, Fiber Optic Patch Cord, Fiber Optic Splice Closure, Drop wire clamps, Down lead clamps, pole brackets, pole banding, Anchoring and Suspension clamps, cable slack storage, etc. We offer most completed range of passive optical network accessories.
ယခင်: Fiber Optic Distribution Box, 16 Cores, FODB-16X
နောက်တစ်ခု: ရပ်ဆိုင်းမှုဆုပ်ကိုင် SGR